Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furey wareega labaad ee shirka Madasha Wadatashiga Qaran(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furey wareega labaad ee shirka Madasha Wadatashiga Qaran(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furey wareega labaad ee shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee lagu go’aamin doono nooca doorasho ee uu dalka yeelanayo sannadka 2016-ka.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qeybgaley madaxda maamullada gobollada ee Jubba, Galmudug, Puntland , Koonfuur Galbeed Soomaaliya, maamullada gobollada Banaadir, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, ururrada bulshada, wakiillada beesha caalamka iyo marti sharaf kale.
Khudbad uu furitaanka shirka ka jeediyay Madaxweynaha, ayaa waxaa uu shacabka ku xusuusiyey in tani ay tahay fursad muhiim ah oo ay kaga tala bixin karaan mustaqbalkooda siyaasadeed.
“Madasha Wadatashiga Qaran waa mid muhiim u ah taariikhdeena dowlad dhisidda ee aan muddo soo wadney. Waxaan idin sheegayaa in ka hor inta aanan halkan imaan, aniga iyo madaxda maamullada aan muddo saddex maalmood ah ku jirney wadatashiyo adag oo aan ku gorfeyneyno mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeena. Maantana waxaan halkan u joognaa inaan aaraadiina dhegeysano, talo isku darsano, aan faaqidno talooyinkii laga soo uruuriyay shacabka labadii bilood ee la soo dhaafay, ugu dambeytiina aan qaadano talo mid ah,’’ ayuu yiri Madaxweynaha.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa intaa ku darey in loo baahan yahay in kulamada noocaan ahi ay noqdaan kuwo abuuraya rajo cusub oo Soomaali ay leedahay, aakhirkana horseedi kara inaan dib cagaheena isku taagno, aana soo dhisno nidaam dowladeed oo sal adag, kuna dhisan nabad, caddaalad iyo horumar.
“Inagoo wadajirna ayaan horumar ku gaari karnaa. Waddankeena dhibaatooyin badan oo xanuun badan ayuu soo marey. Ma dooneyno in xusuusta murugada leh aan ku saleyno mustaqbalkeena. Waxaan u baahanahay inaan la imaanno is-cafin, wada noolaansho, iyo inaan abuurno jawi nabadeed oo naga saara cabsida iyo kala aamin baxa nagu jira. Waa dhab inaan wajahayno amaba aan dhammaanteen wada dooneyno inaan qaadano nidaam cusub oo siyaasadeed oo aan horey loo tijaabin. Waa inaan cabsida iyo shakiga meel iska saarnaa, lana imaanaa geesinimo aan ku wajahno mustaqbalkeena, waana hubaal inaan guuleysaneyno, inagoo wadajirna oo ummad mid ah’’.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbaddiisa ku xusay in hannaankan socdaa uu yahay mid Soomaali leedahay, talo Soomaaliyeedna lagu shaqeynayo, loona baahan yahay in laga wada faa’iideysto.
“Beesha caalamka iyo waddamala kale ee ina taageeraya kaalintooda waa fududeyn. Talada gacanteena ayay ku jirtaa. Waxaan halkan isugu nimid inaan ku gaarno talo Soomaaliyeed, taas ayaana keentay in gobollada kala duwan ee dalka ay ka dhacaan kulamo wadatashi ah oo shacabka fikradahooda lagu dhegeysanayo. Fikradahaasi kala duwan ayaa lagu dhisi karaa hannaan dimoqraadiyeed oo talada ay shacabka leeyihiin. Waa Ilaahay mahaddii in safar dheer kadib aan maanta soo gaarney meel muhiim ah oo shacabkeena ay mustaqbalkooda ku go’aaminayaan, talana ay ku leeyihiin’’, ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa u mahad celiyay beesha caalamka, kaalinta ay ka qaadatey fududeynta wadatashiyadan muhiimka u ah mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya, isagoo dhanka kalena ka codsadey shacabka Soomaaliyeed inay sida saxda ah uga faa’iideystaan taageerada beesha caalamka ee dib loogu dhisayo Soomaaliya.
Munaasabadda waxaa kale oo khudbado ka jeediyay Guddoomiyaha Baarlamanka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari,Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa, madaxda maamul goboleedyada, diblomaasiyiinta iyo mas’uuliyiin kale.
Faahfaahin laga helaayo dagaalkii maanta ka dhacay magaalada baledweyne